Somaliland oo sheegtay inay waan waan ka bilaabi doonto Sool, Sanaag iyo Cayn • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland oo sheegtay inay waan waan ka bilaabi doonto Sool, Sanaag iyo Cayn
Somaliland oo sheegtay inay waan waan ka bilaabi doonto Sool, Sanaag iyo Cayn
July 28, 2010 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha cusub ee maamulka Soomaliland Axmed Siilaanyo ayaa maanta ka hadlay dagaaladii ka dhacay deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn, asagoo sheegay in xukuumadiisa ay waan waan la geli doonto beelaha ku dhaqan gobaladaasi.
Axmed Siilaanyo oo maanta ku dhawaaqay golihiisa Wasiirada, ayaa khudbadiisa kusoo qaatay in dowlada Somaliland ay dooneyso in si nabad ah ku dhameyso xiisadaha ka taagan gobaladaasi, asagoo sheegay in waan waan ay la geli doonaan cuqaasha iyo issimada kasoo jeeda deegaankaasi.
“…dagaalada maaha kuwo cid ay dani ugu jirto, waxaanu ku dadaaleynaa oo xooga saareynaa in aan si nabad ah ku dhameyno…” ayuu yiri Axmed Siilaanyo.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalada ka socda koonfurta Soomaaliya asagoo sheegay in ay ka xun yihiin dhiiga uu weli sii daadanayo, asagoo ugu baaqay kooxaha ku dagaalamaya koonfurta Soomaaliya inay ka waantoobaan dhibaatada soo gaareysa shacabka Soomaalida ah.
Macadda waan waanta uu ku dhawaaqay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ee SSC qaabka ay noqon doonto iyo habka uu u abaari doono, ayadoo ay horey u jireen warar sheegaya in uu jiro xiriir hoose oo dhexmaray dhaq dhaqaaqa SSC iyo Axmed Siilaanyo, walow wararkaasi ay beeniyeen maamulka SSC oo sheegay inaysan wax wadahadal ah la gelin Somaliland, walow aysan meesha ka saarin in mustaqbalka uu wadahadal imaan karo.
Sidoo kale waxaan la ogeyn kaalinta ay ka qaadan karaan waan waantan Issimada SSC oo ayagu horey arrimaha gobaladaasi kaalin weyn ugu lahaa aasaaska dhaq dhaqaaqa ka dhanka ah Soomaaliland.
Waxaan ayaduna cadayn kaalinta Puntland ee ayaduna deegaanada SSC sheegata iyo habkii ay uga jawaabi lahaayeen siyaasada cusub ee Soomaaliland ee ku wajahan gobalaasi ee ah in wadahadal lala galo kooxaha hubeysan ee deegaankaasi u istaagay.